Garoowe ( HM )-Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ayaa dhawaaq dheer ku sheegay Musuq maasuq baaxad weyn in lagu sameeyay soo xulida Xildhibaanada cusub ee Puntland, wuxuuna ku baaqay inaan la dhaarin karin 5 Xildhibaan oo kuraasta baarlamanka kasoo galey Gobolladda Sool iyo Sanaag. HALKAN KA DAAWO VIDEO Magacyadda Xildhibaanada uu dalbadey Garaadku inaan laga dhaarin waxaa […]
Daawo:-Buuhoodle Caaqil Xasan Dahable oo iscasilay ,markii laga sii daayey Nin wax dilay oo uu soo qabtay iyo Wararkii ugu dambeeyay-Video
Buuhoodle ( HM ) Caaqil Cali Abdi Cali( Cali Dahable) oo kamid ahaa Cuqaasha Gobolka Cayn, oo Warbaahinta maanta kula hadlay Buuhoodle ayaa sheegay inuu Iska Casilay Xilkii Caaqilnimo ee Beesha Reer Shawe/Cali-geri u hayey. Waxaa la sheegay inay Arintan ka dambaysay Kadib markii dhowaan Nin Kasoo Jeeda Ardaaga uu Caaqilka u yahay uu Geystay Fal […]
Daawo:-Garoowe Xildhibaanadda cusub ee Puntland oo ka kooban 66 Xubnood waxaa ku jirta Hal Gabadh oo Reer Laascaanood ah-Video
Garoowe ( HM) Gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada Puntland ayaa goordhawayd ku dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Puntland. HALKAN KA DAAWO VIDEO Liiskan xildhibaanada ah ee ay ku dhawaaqeen gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada ayaa ka kooban 66 xubnood waxaana 65 ay yihiin rag waxaana kaliya dumar ah ka […]
Deg Deg:-Xildhibaanadda cusub ee Puntland oo lagu dhawaaqay, Liiska Magacyadda-Akhriso
Garoowe (HM)-Puntland gaar ahaan Garowe Guddiga oo la magacaabay 3-dii bishan December ayaa mudda 27 maalmood ah ku hawllanaa xallinta kuraasta lagu muransanyahay ee xubnaha doonaya in ay kamid noqdaan Baarlamanka ayaa goor dhoweyd shaaciyay magacyada xildhibaannada Baarlamanka,kuwaasoo isugu jira 49 cusub iyo 17 xubnood oo ka tirsanaa Baarlamankii hore,balse dib loo soo doortay.
LIVE TOOS U DAAWO:-Shaacinta Xildhibaanada cusub ee Puntland-Video
Garoowe (HM)-Sida qorshuhu uu yahay waxaa goordhow lagu wadaa in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Puntland. Gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada Puntland ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqista xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ee shanta sano ee soo socota. HALKAN KA DAAWO VIDEO Xildhibaanada ay gudiga ku dhawaaqi doonaan ayaa caadiyan ka […]
Puntland Faa’iidooyinka Ugu Jira Doorashada Dr. Cali Ciise Cabdi-Akhriso
Garoowe ( HM ) -Heer Caalam iyo heer Qaran-ba hadduu ku guulaystay, inuu Hoygiisa ku soo laabto waa himilo cusub. [ Puntland iyo Dr. Cali Ciise Cabdi] Dr. Cali Ciise Cabdi waa haldoor caalami ah oo dunida wax badan u soo qabtay. Waddamo waawayn oo African iyo Carab ba leh buu abaal u galay oo […]
Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo Saxiixay Heshiiska Naafadda Qaranka-Video
Muqdisho (HM ) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga lagu aas aasayo Hay’adda Naafada Qaranka, kaasoo dhowaan ay soo ansixiyeen Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka. Munaasabad ka dhacday Madaxtooyada oo Madaxweynaha ku saxiixayay sharcigan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday Dadka Naafada oo sharcigan si gaar u quseeyo, Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul […]
Daawo:-Golaha Wakiilada Puntland oo goordhow la shaacin doono-Video
Daawo:-Shirkadda Dp world oo ka baxaysa Dekedda Berbera iyo Heshiiskii Soomaliland-Video
Muqdisho (HM)-Shirkadda maamusha dekadaha lagana leeyahay Imaaraatka carabta ee Dp world ayaa qorsheyeysa in ay ka guurto dekadda Berbere ee Soomaaliland oo heshiis sadex geesood ah ay ku joogto sida ay inoo sheegeen ilo xog ogaal ah. Shirkadda DP world ayaa sanadkii hore waxaa dalka sharci looga mamnuucay soo saaray Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, […]
Maamulka Soomaliland oo ka hadlay Heshiis Dowladda Soomaaliya la gashay Shiinaha-Akhriso
Hargeysa (HM) – Maamullka Somaliland ayaa ka hadashay heshiiska ay Dawladda federaalka Soomaaliya la gashay Shirkadaha Shiinaha laga leeyahay ee ku bahoobay COFA, kaas oo ay Soomaaliya ugu saxeexday inay ka kalluumaystaan badda Soomaaliya. Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, ayaa yidhi “Waanu ka war haynaa, oo waanu maqalnay inay Dawladda Soomaaliya heshiis […]